Ukuvukela okuphelileyo kunye nokubiza iirhafu eziphezulu kunye nolawulo olupheleleyo kuzo zonke iinkcukacha zobomi bakho: UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	14 Oktobha 2019	• 4 Comments
Ukuvukela okuphelileyo kunye nabaqhasazi bemozulu bakubiza ukuba ukhuphe imali eninzi nangokwazisa ngenkqubo yerhafu yomhlaba. Apho e-China nase-India bengathathi-nxaxheba kukhuphiswano lwemozulu nakwizikhululo zamandla eziqhutywa ngamalahle e-China umhlaba uyanyikima I-3x njengombane omninzi ukuvelisa ngaphezulu kokuvelisa konke kombane e-United Kingdom, izikhululo zombane ezifumaneka ngamalahle eYurophu kufuneka zisondele ukuze zinciphise ukukhutshwa kwe-CO2.
Ngaba uyazi ukuba akwenzi mahluko ukuba ingakanani CO2 ehamba emoyeni? Izishoshovu zemozulu ziyaqhubeka ukuphinda ubuxoki, ngaphandle kokungena ngaphakathi. I-CO2 kukutya kwezityalo kunye nemithi kunye neefom zezinto ze0,04% zemozulu yethu. Ayisigesi yityhefu, kodwa irhasi elungileyo. I-CO2 yirhasi eyimfuneko eguqulwa ibe yioksijini ngemithi nezityalo. Iqondo lokushisa emhlabeni alinyuki, kodwa inkcitho yakho yerhafu iyenyuka.
Iintshatsheli zemozulu zilwa ngelishwa zilwa nengxaki yokuzikhohlisa. Injongo ebalulekileyo? Kubuza imali ngakumbi epokothweni. Ngaba awuyikholelwa loo nto? Emva koko jonga kuqikelelo lwerhafu eqikelelweyo ngezantsi ngokwe Washington Post:
Ibonisa ukuba kwiqela le-20 kuqoqosho olukhulu, irhafu inokuphakamisa iindleko zamandla ngomndilili wepesenti ye-43 yombane kunye ne-14 yepesenti yepetrol kumazwe athathelwe ingqalelo.
Abantu abagxeka ukuqiqa kweentshukumo zemozulu bafumana i-Star of David ngebala 'Umkhanyeli wemozulu'ubambekile. Isitampu esingenangqondo ngokupheleleyo, kuba awukwazi ukuyikhanyela imozulu, kanye njengokuba ungenakukwazi ukukhaba ukunyakaza kwamathumbu akho. Imozulu ikho. Imozulu yinto yendalo. I-CO2 ilungile kuphela kwimeko yemozulu, njengoko kuchazwe ngu-geophysicist uWillie Kungekudala kwividiyo engezantsi. Iinzululwazi ezibeka i-ajenda yokufudumala komhlaba ukusebenza kwengqondo sukukhonza sibekekile. Ngokucacileyo umthetho uyasebenza nalapha 'ngubani ohlawulayo omiselweyo'.
Amandla okuqhuba emva kwentshukumo yokuBuya ngokuchaseneyo akhuphe zonke izitayile zokudlala ebantwini kwaye engathandabuzi ukuveza ekuhleni ukuba kudlaliwe. Oko kubonakala kuyindlela entsha yokujongela phantsi iyelenqe: Sibonisa nje ukuba sisebenzisa indlela yokuguqula i-CIA kwaye sibonisa nje ukuba sihlawula ababhikishi.
Ewe, ngokuqinisekileyo! Ukupheliswa kwemvukelo kufanelekile Indlela yokuguqula umbala ka-Gene Sharp apho oorhulumente abaninzi baye banyanzelwa ukuba baguqe ngamadolo ngabaseMelika. Ke uyazi ukuba yintonisinelunda nje ngayo kwaye siyisebenzisa ekucaciseni imeko yemozuluMsgstr ". Phantsi kwesikhokelo sika 'Buyekeza ububi ngobubi"mhlawumbi? Owu ,umahluko mni! Isiphelo sibonisa indlela, ukucinga kuyakuba. Kwaye ngokukhawuleza ugawula ingca phantsi kweenyawo zabagxeki. Ngokulula sisebenzisa le ndlela iye yanceda ilizwe lonke kunye noqoqosho lwazo ukuba lufumane izandla kwezi bhombu, ukuze i-NATO iphose iibhombu emva kwayo kunye ne-IMF isasaze imalimboleko yayo kunye nokubamba amazwe ngenkani e-US. Konke oku kuphantsi koqweqwe lokuzisa 'inkululeko'. Ngu I-NATO Stratfor isebe eliyinkosi nenkosi yale ndlela yokulwa imfazwe yengqondo. Akukho nto igwenxa malunga nelungelo?
Ngaba bakhona abantu abathi Ukupheliswa Kwemvukelo yingqele Amatshantliziyo ahlawulelweyo zikho? Ah, ngabo bantu ngokufanayo banxiba i-Star of David 'mugidi lwemozulu'. Aba bantu ababoni ukuba konke kunokwenzeka ngeli xesha. Sivumelekile ukuba sisebenzise ii-NGOs kunye neengxowa-mali ezivela kuGeorge Soros okanye omnye umntu. Zonke iindlela zivunyelwe kule njongo. Injongo yokunyuswa kwirhafu yehlabathi, ngenxa yabaphathi bobuchwephesha abaziingcali. Bonke abagxeki badityaniswa kwintengiso enobunkunkqele kwintengiso eyakhiwe ngononophelo 'ekunene' (isiNgesi: iphiko lasekunene). Olo phiko lwasekunene ludityaniswa noDonald Trump, uBoris Johnson kunye (kancinci kufutshane nekhaya) i-Thierry Baudet's kunye noMarine LePen's yelihlabathi. Ekuhambeni kwexesha uqoqosho lwaseMelika Ukuphefumla kwaye wenze ingxoxo yeBrexit yentlekele kwi-Eurozone, uye wajongana nayo yonke loo nto yokucinga kwi-1x kwaye usicacisile kakuhle sonke isigxeko sokugxeka ukuba udibanise nophawu. Lilo iqhinga.
Inkuthazo yemozulu imalunga nokunxaxha ngokwenkolo ngaphandle kobungqina. UThixo omtsha "yimozulu" kwaye uPopu uFrancis unokusebenzisa ukulandela kwakhe okukhulu kunye nefuthe kubemi behlabathi ngoMeyi 2020 ilungele ukutsiba. Siqhubela phambili kwinkqubo yehlabathi jikelele njengombanduleli kurhulumente wehlabathi apho yonke into kwaye wonke umntu uza kuwa phantsi 'kwe-intanethi yezinto'. Yinto elula ukuba kungekudala siza kuba nenethiwekhi ye-5G yomhlaba; yaqaliswa zi-arhente zeendawo ezinjenge-ESA (jonga ngezantsi). 'Kwiintanethi zezinto' zonke izinto ezenziwayo ziya kulandeleka ngokukhawuleza kwaye ukuba unokuzithengisa phantsi kwesikhokelo sika "Emva koko sibona ngokuthe ngqo ukuba ingakanani CO2 oyikhuphayo, ingakanani inyama oyityileyo kunye neninzi yeplasitiki oyityayo", Ungalawula zonke iinkcukacha zobomi bomntu wonke kwihlabathi liphela phantsi kwealibi ye'mozulu '. AmaTshayina Inkqubo yeTyala leSesame Sele ilungile ityala lokuvavanywa.
Zendalo zikubiza lelona bukhoboka liphela. I-fanism edityaniswe kunye nokufumana umvuzo ongezelelweyo njengengenelelo lobugcisa lithetha ukuba aba bantu banceda ukukhawulezisa ukwakhiwa kwenkqubo yobukhoboka yedijithali. Siphinde saxoxa kodwa ingezizo izixhobo zokwenziwa ezisetyenziswa kuzo zonke ezo "zibhengezo zobume bendalo". Le ntolongo ngaphandle kwemivalo ebonakalayo iphantse iyinyani kwaye ngoku iyakhawuleziswa ngenxa yenzondelelo yemozulu.
Uludwe lwekhonkco lovimba: washingtonpost.com, mailonsunday.co.uk, akukho ndawo, akukho ndawo, alt-market.com
tags: irhafu, irhafu, Ukupheliswa Ukupheliswa, eziziimbalasane, mozulu, Izishoshovu zemozulu
14 Oktobha 2019 kwi-08: 46
Nangona kumandla adlulileyo ngaphezulu kweendlela zaselwandle zazibaluleke kakhulu, ngoku lixesha lezinto ezinesithuba. Isizathu sokuba oku kwenziwe kubaluleke kangaka, ngokoluvo lwam, ukwenza iklasi ye-asethi entsha enokuthi isebenze njengendibaniselwano ukunika isixa semali esikhulileyo kumalungu ayo ukusika okuthambileyo ukuze umdlalo ofanayo uqhubeke njengesiqhelo. Indawo yempahla yexabiso lee aset, umzekelo, zinokuthatha isahlulo salo lonke ixabiso elithe liphuma kwi-bubble ethengiswayo.
14 Oktobha 2019 kwi-17: 00
Luphawu, imveliso yokuphiswa kwengqondo iminyaka emininzi ngokwemodeli yobukomanisi.
Abafundi abathathe inxaxheba yile nto ichazwa nguLenin njengeziluncedo kumdlalo wokubeka amandla kunye nokulawula onke amabakala obomi. I-China ngumzekelo ogqibeleleyo woku ...
15 Oktobha 2019 kwi-18: 00
Qaphela, sinenye enye eya kubonisa bonke abantu abagxekayo njengophazamisekileyo.
Ibali elothusayo leminyaka eyi-9 ehlala kwigumbi elingaphantsi nosapho, oko kuthetha ukuba omnye wabantwana yayingu-16 xa babeqala le nto. Zange khe ndiye esikolweni, ndilinde ukuphela kwexesha.
Ndicinga ukuba abantwana be-16 abafuni ukuya esikolweni, kodwa ngokuzithandela bahlala kwigumbi elisezantsi yi-bullshit.
Ngaphezulu kwako konke, ukungazifaneli ngokwakho, ukuba wena kunye nabantwana ugonyelwe kwaye ngaphandle kwesikolo nihlala niwushiye umyalezo. Isibini esiphambeneyo 😉
15 Oktobha 2019 kwi-21: 30
Ngqo ... uphambi kwam
I-PsyOp elandelayo ukuba ikwazi ukwenza ukukhangela kwe-1x ngela xesha ... ngoko kubonakala kum
Kodwa ukuba ubhale le nto, uJensen okanye uNiburu.co uyayiba i-scoop 😉
« Umlawuli weMvukelo yokuGqibela uMargaret Klein Salamon: "Inqanaba elilandelayo kukuthatha inyani ukuba yinyani"
URuinerwold Drenthe kunye nosapho lwakhe, ukusebenza kwengqondo elandelayo (PsyOp) ukuya kwisimo samapolisa ngaphezulu »
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.048.982
UMartin Vrijland op URobert Jensen "UDonald Trump akakholelwa kwi-New World Order" uqinisekisa: IJensen.nl ilawulwa ngokuchaseneyo